Akụkọ - Gịnị bụ ụzọ nyocha coronavirus niile?
Kedu ụzọ nyocha coronavirus niile?
Enwere ụdị ule abụọ maka ịbịaru maka COVID-19: nnwale nje, nke na-enyocha ọrịa dị ugbu a, yana ule mgbochi mmadụ, nke na-achọpụta ma ọ bụrụ na sistemụ mgbochi gị wuru nzaghachi maka ọrịa bu ụzọ.
Yabụ, ịmara ma ọ bụrụ na ị bu oria, nke pụtara na ị nwere ike gbasaa nje na obodo niile, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ike ịlụso nje a ọgụ dị mkpa. Nke a bụ ihe ịkwesịrị ịma gbasara ụdị ule abụọ maka COVID-19.
Ihe ịmara gbasara ule nje
Nnwale ịrịa nje, nke a makwaara dị ka ule molekụla, na -ejikarị swab imi ma ọ bụ akpịrị eme ya maka akụkụ iku ume elu. Ndị ọkachamara na -ahụ maka ahụike kwesịrị ị were swab imi, dịka ntuziaka nlele ụlọ ọgwụ CDC emelitere. Agbanyeghị, swabs akpịrị ka bụ ụdị nnwale nnabata ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
A na -anwale nlele ndị anakọtara iji chọọ akara nke ihe ọ bụla sitere na mkpụrụ ndụ coronavirus.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ule dị mgbagwoju anya 25 dị mgbagwoju anya sitere na ụlọ nyocha nke natara ikike iji ihe mberede site na Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ nke United States ruo na Mee 12. Ihe karịrị ụlọ ọrụ 110 na-enyefe FDA arịrịọ ikike, dị ka akụkọ si kwuo. GoodRx.
Kedu ihe ị ga -amata gbasara ule mgbochi mmadụ?
Nnwale antibody, nke a makwaara dị ka nyocha serological, chọrọ nlele ọbara. N'adịghị ka nnwale nje nke na -enyocha ọrịa na -arụ ọrụ, a ga -eme nnwale mgbochi ma ọ dịkarịa ala otu izu mgbe ọrịa coronavirus enwetara, ma ọ bụ ọrịa a na -enyo enyo maka ndị ọrịa nwere asymptomatic na obere mgbaàmà, n'ihi na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na -ewe ogologo oge iji mepụta ọgwụ mgbochi.
Ọ bụ ezie na ọgwụ mgbochi ọrịa na -enyere aka ịlụso ọrịa ọgụ, enweghị ihe akaebe na -egosi ma mgbochi coronavirus ga -ekwe omume. Ụlọ ọrụ ahụike na -eme nyocha ọzọ.
Enwere ụlọ nyocha iri na otu enwetala ikike iji ihe mberede eme ihe site na FDA maka nnwale mgbochi mmadụ ruo Mee 12. Ihe karịrị ụlọ ọrụ 250 na -ejupụta ahịa ahụ na nnwale mgbochi nke nwere ike ọ gaghị abụcha nke ziri ezi, dị ka GoodRx si kwuo, na ihe karịrị ndị nrụpụta 170 na -eche. na mkpebi ikike n'aka FDA.
Kedu maka nnwale ụlọ?
N'April 21, FDA nyere ikike nnwale nnwale nlele coronavirus mbụ sitere na Laboratory Corporation of America. Ngwa nnwale nje, nke LabCorp na -ekesa Pixel, chọrọ imi imi, a ga -ezigakwa ya n'ụlọ nyocha emere maka ule.
Oge ezipụ: Jun-03-2021